Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » India Aviation: New Airlines eo amin'ny Horizon
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny sehatry ny seranam-piaramanidina India, toy ny saika ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany rehetra, dia tsy mba manana fotoana manjavozavo, tsy maninona na ny fotoana eo akaiky na tsara na ratsy. Ity fotoana ity dia misy ny fisehoan-javatra tsara rehetra.
Jet Airways dia mety hiverina amin'ny vatana vaovao indray, miaraka amin'ny famatsiam-bola sy ny mpiasa avy amin'ny loharano vaovao.
Akasa Air dia mety hiala alohan'ny faran'ity taona ity noho ny ampahany betsaka amin'ny mpampiasa vola an'arivony tapitrisa, Rakesh Jhunjhunwala.
Vistara, Air Asia India, ary Air India dia antenaina ihany koa ny hahita fitomboana ho an'ireo kaompaniam-pitanterany.
Tamin'ny fotoana nitrangan'ny COVID-19 - ary mbola nisy - nanimba ny sidina, ny fizahan-tany, ary ny fiainana amin'ny ankapobeny ihany, dia misy vaovao toa feo ho ren'ny sofina, indrindra ho an'ireo mety ho mpandeha.
Taorian'ny be loatra tamin'ny zava-niseho tamin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia ny fahaverezan'ny dolara an-tapitrisany maro sy ny crores ary ny euro - ny anaranao ny vola - ary miatrika fanidiana ianao, raha tsy hiresaka afa-tsy ny famotsiam-bola amin'ny Air India sarobidy indrindra, misy farafahakeliny 2 ho avy ny seranam-piaramanidina eo amin'ny sehatry ny India ary any an-danitra amin'ny ho avy tsy lavitra loatra.
Misy resaka matotra momba ny nianjera Jet Airways miverina amin'ny vatana vaovao indray, miaraka amin'ny famatsiam-bola sy ny mpiasa avy amin'ny loharano vaovao. Satria toa miakatra haingana ny drafitra, dia mbola maro ny voanjo sy bolt sisa hamafisina alohan'ny ahafahan'ny mpandeha misidina amin'ny seranam-piaramanidina feno.